Ahịa Signkick: Na-eweta mbadamba nkume na ọgbọ 'Pịa--zụta' | Martech Zone
Ahịa Signkick: Na-eweta mbadamba nkume na ọgbọ 'Pịa--zụta'
Na Mọnde, Nọmba 1, 2016 Na Mọnde, Nọmba 1, 2016 Andy Hamblin na -bụ mmadu
The Si nke Home mgbasa ozi ụlọ ọrụ bụ nnukwu ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ. N'oge a nke dijitalụ tụkọtara, ijikọ na-eji ọkụ mgbe ha na "na ọ laa" n'ihu ọha oghere ka esetịpụ nnukwu uru. Billboards, ebe nchekwa bọs, akwụkwọ ịma ọkwa na mgbasa ozi na-abụcha akụkụ nke ndụ ndị ahịa kwa ụbọchị. Ha na-enye imirikiti ohere iji zie ozi banyere ndị na-ege ntị dị mkpa na-enweghị asọmpi maka nlebara anya n'etiti ọtụtụ puku mgbasa ozi ndị ọzọ.
Mana ọ naghị adị mfe mgbe niile iwepụ mkpọsa a na-apụ apụ n’ụlọ. Nnukwu ihe ịma aka chere ụlọ ọrụ OOH ihu bụ nnweta ya…
Spare nwere ego mapụtara £ 100,000 maka mkpọsa OOH?
Nsogbu OOH Media Ndị nwe ya na-eche ihu bụ na ọ na-efu ha ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ihe ahụ ịhazi ma debe mkpọsa £ 100,000 dịka ọ na-eme mkpọsa £ 500. Otu oge ịre ahịa, otu oge nchịkwa, otu oge a haziri ahazi, otu oge a haziri ahazi na-abanye izu abụọ iji dọọ ọkwa mkpọsa maka ọrụ Blog Blog nke mpaghara, dịka ọ na-eme maka mkpọsa mba na nnukwu mmefu ego na-agba ọsọ ruo ọtụtụ ọnwa.
Ọ bụ a dịghị-brainer n'ezie. Y’oburu na ibu onye nwe ihe omuma ihe nke nwere ihe ndozi iji gbazite, igha ebute ihe mbu nke ndi agha nke gha agha ugwo. Nke nwere ike ime ka o siere obere ụlọ ọrụ jiri obere ego na-emefu ego ka ị nwee ike ileba anya mgbe ị na-akwụ ụgwọ ohere mgbasa ozi n'èzí. Nke ahụ bụ ihe ihere, ma maka obere azụmaahịa ndị na-efu nnukwu ohere ịre ahịa, yanakwa ndị nwe ụlọ mgbasa ozi, ndị na-efu ọtụtụ ndị ahịa.
Azịza ya bụ akpaaka
Na-apụ n'ụlọ ndị ọkachamara n'ịkpọsa ngwa ahịa, Ntinye aka emepụtawo ihe ngwọta maka nsogbu a. Ha na ndị nwe ụlọ ọrụ mgbasa ozi na ndị na-enye ọrụ na-arụkọ ọrụ ọnụ iji gbanwee usoro ntinye akwụkwọ niile. Akpaaka na-eme ka usoro a dịkwuo ọnụ, nke pụtara na ndị nwe ụlọ mgbasa ozi ekwesịghị ịtụgharị ndị ahịa dabere na obere mmefu ego. A na-akpọ sọftụwia ha ji eme nke a Ahịa Signkick.
Ahịa Signkick OOH akpaaka
Ahịa Signkick bụ sọftụwia nke ndị nwe ụlọ ọrụ mgbasa ozi nwere ike ịtọ-ka ndị ahịa nwee ike ịchọta ma debe ohere mgbasa ozi nke aka ha n'ịntanetị. Ọ na - ejikọ usoro nnweta nke ndị nwe ụlọ ọrụ iji gosipụta nnweta saịtị nke akwụkwọ ntanetị na ndị ahịa na maapụ ịntanetị.
Ezubere iji mee ka ahịa OOH nwekwuo ohere ịnweta mmadụ niile, ahịa ahịa Signkick na-enyere ndị azụmaahịa aka:
Chọọ ma debe ohere mgbasa ozi n'ịntanetị - Ndị ahịa nwere ike ịhụ ngwa ngwa ebe saịtị mmado, bọọdụ mkpọsa na ihe ntanetị nwere, maka ogologo oge na ego ole. Ndị nwe ụlọ ọrụ mgbasa ozi nwere ike ịhọrọ nhọrọ nke aka ha, dịka ọnụahịa nke egosiri ebe, ihe ozi ọzọ iji gosipụta, yana ma ikpo okwu a mepere emepe maka ọha na eze, ma ọ bụ naanị ndị ahịa na ụlọ ọrụ ha tụkwasịrị obi.
Sochie mkpọsa - Ozugbo ndị ahịa mgbasa ozi edere akwụkwọ maka ndị ahịa nwere ike ịgbaso ọganihu ya, dịka ị ga-achọ na ngwugwu ngwugwu ngwugwu.
Jikwaa ihe osise - ndị ahịa nwere ike ibugo ọrụ nke aka ha, ma ọ bụ soro ndị nwe Media rụọ ọrụ iji mepụta ọrụ osise maka mgbasa ozi ha. Usoro a nwere usoro a haziri ahazi, nke na-amalite site na izipu ndị ahịa ihe osise ọfụma n'oge ntinye akwụkwọ wee mechie ihe osise a na-enyefe na ngwa nbipute gị.
Nata akara ncheta na mmelite email - ihe ncheta na akpaghị aka na mmelite na-eme ka onye ọ bụla mara ọkwa nke usoro ọ bụla, mana dịka onye nwe ụlọ mgbasa ozi na-enweghị aka.
N'adịghị ka sọftụwia ndị ọzọ dị maka ịdebanye oghere mgbasa ozi n'èzí, Ahịa ahịa Signkick anaghị elekwasị anya na Digital Out of Home. Usoro ahụ na-enyere ndị zụrụ ihe aka ịchụso akwụkwọ mmado na akwụkwọ mmado mara mma ha n'otu ụzọ ahụ ha nwere ike isi soro ihe mmado dijitalụ ha.
Ọrụ mkpesa na-emepe ohere ọhụụ maka ndị nwere Media
Ahịa Signkick nwere ọrụ nke abụọ, nke bụ ịnakọta na nyochaa data dabere na onye na-azụ oghere mgbasa ozi OOH. Site na inyocha akparamagwa nke ndi ahia ha, ihe ha na ele anya na mgbe, ndi nwe Media nwere ike mejuputa onu ahia saiti na akuko data, meputa uzo ohuru ma meputa mmemme mmeghari ohuru.
Ihe omumu ihe omuma: JCDecaux
Nnukwu azụ na ụlọ ọrụ OOH, JCDecaux na-arụ ọrụ na Marketkick na-adịbeghị anya iji nweta akwụkwọ ntinye aka maka saịtị mgbasa ozi ha na Belgium. JCDecaux ghọtara mkpa ọ dị ịhazi usoro ha iji mepee ụzọ azụmaahịa ọhụrụ.
Site n'ime ka usoro ntinye akwụkwọ ahụ rụọ ọrụ nke ọma, ma mee ka ndị ahịa nwee ike ijikwa mkpọsa nke ha, JCDecaux enweela ike ilekwasị anya na atụmatụ ire ahịa na iwulite mmekọrịta na ndị ahịa. Ọ pụtakwara na ha enweela ike ịre ohere mgbasa ozi wee wulite mmekọrịta na ndị ahịa nwere obere ego. Mgbe obere mkpọsa mgbasa ozi ahụ malitere itolite, JCDecaux ga-abụ onye izizi mara.
Ihe niile dị ọhụrụ, ya na JCDecaux ọhụrụ website na-arụ ọrụ naanị ọnwa 2, mana ntinye akwụkwọ na-abata.
Akpaaka bụ ọdịnihu nke OOH
Oge na-agbanwe agbanwe, ọ bụkwa otu ahụ ka ndị mmadụ si atụ anya ịzụta. Na oge dijitalụ a ị nwere ike ịzụta ihe niile site na uwe na nri, n'ụgbọala na ezumike n'ịntanetị. Yabụ kedu ka ị ga - esi tinye akwụkwọ mmado na bọọdụ mkpọsa?
Ahịa Signkick na-enye ndị nwe ụlọ mgbasa ozi ohere ịnweta ya Pịa-ịzụta usoro, na ịnabata ndị ahịa nwere obere ego. Akpaghị aka ntinye akwụkwọ na atụmatụ nke mgbasa ozi mgbasa ozi na-enye onye ọ bụla ohere ịnweta ọrụ na ohere ndị dịịrị naanị ndị ahịa buru ibu.
Tags: JCDecauxOohOOH akpaakan'èzíakara aka
Andy Hamblin na -bụ mmadu
Andy anọwo na ụlọ ọrụ dị n'èzí ruo ihe karịrị afọ 10, na-arụ ọrụ na atụmatụ na ịzụta nke mkpọsa na ahịa. CV ya na-ekpuchi ọtụtụ aha ndị a kacha akwanyere ùgwù na azụmaahịa ahụ gụnyere Posterscope, JCDecaux na ECNlive tupu Ha abanye Ntinye aka na 2014. Ọ bụ a siri ike na-akwado nke iwebata technology na-arụ ọrụ ka akwụkwọ mmado ụlọ ọrụ na ebumnuche nke rụọ ọrụ na-eto eto na-aba ụba na ego.
Uru nke Video maka Search, Social, Email, Nkwado… na More!